ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट अब के हुन्छ ? - Naya Aawaj
ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट अब के हुन्छ ?
२९ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत जेठ १५ गते अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको भविष्य सङ्कटमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएर विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चित गराएसँगै ओली सरकारको अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटका विषयमा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पहिलो पटक अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको भविष्य कार्यान्वयनमा नजाँदै अन्योल बनेको हो ।
नेपालको संविधान धारा ११४ को उपधारा १ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर बजेट ल्याइएको थियो । विगतमा अध्यादेशबाट बजेट आएको वर्ष समेत संसद् आइसकेपछि पूर्ण संशोधित बजेट आएको इतिहास छ । आव २०५२।५३ मा एमालेको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विघटित संसद् पुनः स्थापनापछि काँग्रेसले पूर्ण बजेट ल्याएको थियो । अहिलेको अवस्था पनि सोही समयको जस्तो भएको छ । अधिवक्ता लोकभक्त राना नयाँ सरकार आएपछि तुरुन्त प्रतिनिधि सभा डाक्ने र सो सभाले अहिले बजेटलाई कतिको समर्थन गर्छ, त्यसमा नै भर पर्ने बताउँछन् ।
तथापि कुनै पनि नयाँ सरकार आएपछि उसले आफ्ना कार्यक्रम पनि राख्न खोज्छ । यसकारण जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा लैजाने सम्भावना कम रहने उनको भनाइ छ । बजेट केही परिमार्जन अथवा पुरै खारेज गरेर नयाँ पनि ल्याउन सकिने विकल्प रहेको रानाले बताए । उनले भने, ‘नयाँ सरकारले बजेटबारे आवश्यक निर्णय लिन सक्ने अधिकार रहन्छ संशोधन, परिमार्जन वा नयाँ बजेट के चाहन्छ ? सोही अनुसार अघि बढ्छन् ।’ पूरक बजेट ल्याउन पनि सकिने उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि जेठ १५ गते १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट अर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णु पौडेलले ल्याएका थिए । ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित ल्याइएको बजेटमा १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ र चालू खर्च १० खर्ब ६५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । तर अहिलेको सत्ता समीकरण कस्तो हुन्छ र उसले लिने नीतिमा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।
व्यापार घाटा १४ खर्ब
एनसेलसहित तीन बहुराष्ट्रिय कम्पनीको साढे २ अर्ब नेपालबाट बाहिरिँदै
कोरोना खोप किन्न एडीबीले दिने भयो २० अर्ब ऋण
कोरोना बीमा : गल्ती गरिएछ, यसबाट ठूलो पाठ सिकियो !
आलु चिप्सकाे प्याकेटमा अक्सिजन भर्दा करोडौंको नोक्सानी, ग्यास कम्पनीलाई कारबाहीको माग